विदेशबाट श्रीमान घर आएर जब श्रीमतीलाई भने-”यस्ता चाउरी परेका गाला छि: छि” (भिडियो) – Etajakhabar
विवाह विश्वासको सम्बन्ध हो । तर विश्वासमा सानो कस आउँछ अनि विश्वास भत्कन्छ । विश्वास भत्किएपछि सम्बन्ध पनि तहस नहस हुन्छ । विदेशमा श्रीमान तर घरमा भएकी श्रीमतीले उनको परिवार सम्हालेर घरमा बसेकी हुन्छिन् । श्रीमान आएपछि जिवन सहज बनाउँला भनेर घरमा विभिन्न समस्या सहेर बसेका हुन्छन् ।
कति यस्ता महिला छन् जो विदेशमा श्रीमानले कमाएको सम्पत्ती समेत लिएर हिडेका हुन्छन् । तर यस्ता नारी पनि यो संसारमा छन् जसले श्रीमानको मायाका लागि सारा जिवन एक्लै बिताएका हुन्छन् । तर त्यही श्रीमानले आफ्नो माया र त्यागको बदला धोका दिएपछि पनि अझै फर्केर आउँछन् की भनेर आश गरेर बसेका हुन्छन् ।
बुटवलकी फुलमाया (साहिँली) त्यसको उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान लामो समय पछि घर आए । तर उनै श्रीमानले तँ बुढी भइस्, तेरो गाला चाउरी परेछ भन्दै अनुहारमा थुकेपछि त्यो श्रीमतीको मन कस्तो भयो होला । विवाह गरेको २२ वर्ष पछि मेरो कान्छि श्रीमतीको खुट्टामा राख्दा पनि तं सुहाउँदिनस्, मेरो कान्छी श्रीमती स्वर्गको अप्सरा जस्ती छन् भन्दै बर्दियामा उनलाई भेट्न जाने गर्न थाले । अहिले उनका २० र ११ वर्षको दुई छोरा छन् । दुवईमा रहेका एककुमार गोले नाम गरेका उनले त्यस्तो ब्यवहार गरेका हुन् ।
विदेशवाट दुई महिनाका लागि नेपाल आउँदा उनले त्यस्तो ब्यवहार गरेका हुन् । दुवई गएको ५ वर्ष भयो । तीन वर्ष यता उनले पैसा पनि पठाएका छैनन् । सुरुमा साउदी गएका उनी फर्केर आए । त्यसपछि दुवई जाने बेलामा उनले सापटी खोजेर श्रम गर्न पठाइन् तर त्यतीबेला उनले अर्की महिला लिएर काठमाडौंमा बसेको उनले जव थाहा पाइन् त्यतीबेला उनको मन भक्कानियो ।
श्रीमानले कमाई नगरेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा १६ वर्ष काम गरिन् । ४५ दिनको सुत्केरी हुँदा पनि उनी काम गर्न गइन् । कम्पनीमा काम गर्दा उनको एउटा औंला का’ट्यो । घरमा रहंदा पनि उनले कुनै काम गर्थेनन् । उनी त्यसै हल्लेर बस्थे मैले नै कमाएर ल्याउने हो । अहिले विदेशमा रुपमा नाम गरेकी महिलासंग सम्बन्ध भएपछि तीन महिना यता सम्बन्ध राम्रो छैन ।
अर्की श्रीमती ल्याएपछि उनले आफन्त गुहारीन् । त्यतीबेला उनले अब म विग्रन्न, पैसा पठाउँछु भनेर वाचा गरे तर ब्यवहार भने परिवर्तन भएन । उनले अहिले आफुलाई ११ लाख भन्दा बढी ऋण लागेको बताइन् । उनले मनले नचाहँदा नचाहँदै आफ्नो कलकलाउँदो २० वर्षको छोरालाई पनि विदेश पठाउन बाध्य भएको बताइन् । तीन छोरा एक्लै हुर्काइन् ।
Posted on: Saturday, February 22, 2020 Time: 13:29:21
बाबुको निधन भयो, आमाले चन्दा उठाएर जम्मा गरेको रकम दाहसंस्कार गर्न पर्याप्त भएन, विलखबन्दमा छोराछोरी !
पोखरामा लक डाउनको प्रभाव पोखरामा पनि देखियो, रोड सुनसान, बजार पूर्ण रुपमा बन्द !
देशमा संकट परेको बेलामा नेपाली सेना जाग्यो, कोरनाको जोखिम रोक्न सेनाको यस्तो छ तयारी
भोलि देखि बिराटनगरमा अनिश्चितकालीन ‘लक डाउन’ गर्ने घोषणा
-14430 second ago
-10307 second ago
-9787 second ago
-3383 second ago